eNasha.com - पान्तरी रहिनन्, कोइली बिर्सिइन्नन्
"बूढेशकाल लागेपछि पिलपिले लाग्छ", साहित्यकार नरेन्द्रराज प्रसाइँ एक बिहान यस पंक्तिकारसँग बतियाउँदै थिए । प्रसङ्ग थियो, कोइली दिदीको । हुन पनि कोइली दिदी कुरा गर्न बसिन् भने हरेक पाँच मिनेटमा 'पिलपिल' गर्न थालिहाल्थिन् । उनलाई समाज, सङ्गीत र सरोकारवालाहरुले दिएको पीडा थियो, जसका कारण सम्झिल्याउँदा उनको चित्त फाटेर आउँथ्यो । अनि, उनलाई मतलब लाग्दैनथ्यो, कसका अघिल्तिर उनी भक्कानो फुटाउँदैछु ।
शायद यही कारणले पनि होला, पछिल्ला समयमा उनलाई भेट्ने मानिसहरुको संख्या पातलिँदै गइरहेको थियो । उनी दिउँसोसम्म पूजापाठमा मन बहलाउँथिन्, दिउँसो अबेरसम्म घाम ताप्थिन् खानापछि । अनि साँझ नढल्दै ओछ्यान तताउन पुग्थिन् ।
उनले चित्त पनि किन नदुखाऊन् त ! जुन संस्थामा उनले आफ्नो रगत पसिना एक गरिन्, रेडियो नेपाल, उनको मुटुमा पेसमेकर राख्न अलिकति पनि सहयोग गरेन । जबकि उनले गिड्गिडाइरहेकी थिइन्, मोहनगोपाल खेतानले पुरस्कार दिन्छन्, त्यही पुरस्कारको राशी पछि तिमीहरुलाई लौटाउँला ! तर रेडियो नेपाल चूप !
तर पेसमेकर राखेपछि उनी यताउति दौडिन थालिन् । उनलाई पुरस्कार दिने र दिलाउने होड चल्यो । कुनै पाँच हजारका, कुनै १० हजारका । रेडियोबाट आउने पाँच हजार रुपियाँको पेन्सन र बेलाबखतमा उनले पाउने पुरस्कार नै उनको जीवन चलाउने मेसो बनेको थियो । कति पटक त आफूले पाएको पुरस्कार बीच बाटोमा नै सिध्याउने गर्थिन् । उनी बस्ने जैसीदेवलको घरकी बुहारीले एक पटक मसँग गुनासो गर्थिन्- "उहाँले आधा पैसा बीच बाटोमा नै केटाकेटीहरुलाई के के जाति खुवाएर सक्नु हुन्थ्यो अनि घर आउँदा आधा पैसा ! कहिलेकाहीँ हामीलाई ज्यादै गाह्रो ! केही पत्रकारहरुले त कोइलीदेवीको पैसा खाइदिए भनेर समेत लेखिदिए !"
कोइलीदेवीलाई अरुसँग बस्नु पर्दा शायद केही अप्ठेरो थियो, भन्थिन्- "मर्ने बेलामा म आफ्नै घर र्सन चाहन्छु । मेरा यी सप्पै प्रमाणपत्रको बेहाल हुन्छ होला मेरो शेषपछि !" उनी बीचबीचमा यस्तो भन्थिन्- "मैले पाएका प्रमाणपत्रहरुको पर्खाल बनाउने हो भने त इँटा पनि चाहिँदैन होला !" त्यसपछि उनी बेपत्ताको हाँसो हास्थिन्...हि...ही..ही... ।
तर मैले कोइली दिदीसँगको सबैभन्दा भावुक क्षण त्यो बेला देखेको छु, जतिबेला तारादेवी र कोइलीदेवीको भेट जुरेको थियो । यी दुइ देवीलाई २०६२ साल बैशाख १ गते म्युजिक नेपालले तारादेवीका दुइ गीति एल्बमलाई एकसाथ रिलिज गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । तारादेवीको घरकै प्राङ्गणमा सङ्गीतका केही मूर्धन्य व्यक्तिहरु निम्तालु थिए । छुट्टिका दिन भएकाले केही सीमित व्यक्तिहरु मात्र आइपुगेका थिए ।
त्यो दिन यी दुइ देवीहरु एकअर्कालाई अँगालो हालेर निकैबेरसम्म रोए । तारादेवीका अस्पष्ट आवाज थिए तर कोइलीका स्पष्ट । कोइलीले एक साथ आफ्ना र उनका मित्रताका पलहरु सम्झिइन् र आफैँ आँशु पुछ्न थालिन्, "हेर तिमी त कस्ती भइछौ ! कत्ति भेट्न मन लागिर'न्थ्यो, खोई कसैले ल्याइदिँदैनथ्यो । आज भेट भयो !" अनि दुवै अंगालो मारेर केही बेर रोएका थिए । "अब त मै मात्र बाँकी रहन्छु होला", तारादेवीको स्वास्थ्य स्थिति देखेर उनले भनेकी थिइन्- "तिमीले र मैले साह्रै दुःख पायौँ तारा !"
क्यासेट विमोचन पूरै स्तब्ध थियो, यी दुइ देवीको रोदनले । धेरैका गला अवरुद्ध भएका थिए । पछि मैले यही घटनालाई विमोचन कार्यक्रमको समाचार बनाएर छापेको थिएँ, 'आहा सङ्गीत' पत्रिकामा !
यस्तै केही छोटा संस्मरण कोइलीदेवीसँगका मसँग गाँसिएका छन् । त्यो पनि "आहा सङ्गीत पत्रिका" निकाल्दाताका । अब ती फगत संस्मरणमा सीमित रहे । आफ्ना बुवाले राखिदिएको नाम 'पानतारी' भन्दा सिंहशमशेरले उनको स्वरबाट प्रभावित भएर राखिदिएको नाम 'कोइलीदेवी' नै चिरकालसम्म लोकप्रिय रह्यो । अब अझै कैयौँ वर्ष नेपाली सङ्गीतले उनलाई सम्झिरहनेछ । सम्झिने बहाना पनि देहान्त हुनुअघि बनेको छ, कोइलीदेवी सङ्गीत पुरस्कार स्थापना भएर !
मान्छेको जीवन त्यै हो, शरीर मरे पनि आत्मा बाँचिरहन्छ । पान्तरी रुपी उनले देह त्यागे पनि कोइलीदेवीको आत्मा नेपाली सङ्गीतमा चिरकालसम्म रहिरहने छ ।
गायिका सङ्गीतकार लुकेका कुरा रिलिज अवार्ड क्या बात ! कीर्तिमान विचार ट्रयाक बाहिर नेपाली तारा तातोपीरो पेज थ्री समुद्रपार भिडन्त उपलब्धि प्रेम र विवाह रुचि गायक गीतकार परिस्थिति